Dr Robinson Jean-Louis : “Manakorontana ny kandidà mangala-bato” | NewsMada
Dr Robinson Jean-Louis : “Manakorontana ny kandidà mangala-bato”
Hanao ahoana ny fifidianana 2018? “Mamboly korontana izay kandidà mangalatra”, hoy ny Dr Robinson Jean-Louis.
“Hirotsa-kofidina ny filoha, ka lany amin’ny fomba mahazatra hoe halatra. Ny fiheverako azy: fambolena korontana izay. Tsy avy aty amin’ny mpanohitra amin’izao fotoana izao no hahatongavan’izay. Ny mangarahara ny anay, ary tsy manaiky izahay raha tsy mangarahara tanteraka io.”
Izay ny fanehoan-kevitry eo anivon’ny Alliance républicaine de Madagascar (Armada), ny Dr Robinson Jean-Louis, manoloana ny fiatrehana ny fifidianana 2018. Any amin’ny hala-bato no fiavian’ny korontana. Efa fantatra izany, ary hotenenina ny amin’izany avokoa izay mikarakara ny fifidianana.
“Tsy tahotra no itenenanay hoe aoka tsy hirotsa-kofidina ny filoha, fa fahendren’ny zoky sy olona nanao politika talohan’ny tena”, hoy izy. Nofidina tamin’ny lalàmpanorenan’ny Repoblika IV ny filoha hoe ho lasa amin’izay ity Madagasikara ity. Kanjo resaka fotsiny no niafaran’ny fampanantenana: tsy misy vita. Vao mainka miampy aza ny fahoriana.
Mbola averina ihany ny zava-tsy nety teo aloha
Tsy fantatra raha voafahan-dalitra na efa toetra hoe aleo entina ny raharaha, hotohizana, hanaovana fifidianana, hangalarana fiaingana amin’ny fampielezan-kevitra, ampiasana volam-panjakana… “Efa nanaovanay fitoriana tany amin’ny fitsarana izany, mbola averina indray amin’izao fotoana izao”, hoy izy.
Tsy hanao “Ni… Ni… ” indray ny Armada, fa mba miteny: fa tokony hieritreritra izay rehetra mirotsa-kofidina ho filoham-pirenena. Mba olo-marina, salama vatana sy saina, tsy hanaiky ny Malagasy hihemotra, raha ny nambarany.
Tsy zakan’ny mpitondra intsony ny raharaha, dia miteny indray hoe tsy ampy ny fotoana. Maninona no nirotsaka raha ohatra ka tsy ampy ny dimy taona, fotoana nifanomezana? Tsy nanaraka ny lalàmpanorenana hatramin’ny voalohany izany. Mbola ny tena ihany no hitantana amin’ny di-doha…
“Izay zavatra izay no mahatonga anay miteny: fahendrena ary fitiavana ny samy Malagasy ny tsy hirotsahanao intsony ho filoha amin’ny fifidianana manaraka. Vola lany ary firenena mihemotra no ho hitantsika eo… Efa mampalahelo ny mahavoa ny Malagasy amin’izao fotoana izao”, hoy izy.